Language: af Soomaali - Somali
15 Qodob ee lama huraanka u ah daryleel caafimaad - daryeelka ay tahay in lagu siiyo 15 Healthcare Essentials - the care you should receive
Helitaanka daryeel habbooni wuxuu lagama maarmaan u yahay caafimaadka guud ee dadka qaba xanuunka macaanka. Waxa jira heer aanu ka hoosayn karin daryeelka caafimaad ee uu mudan yahay isla markaana filan karo qof kastoo qaba xanuunka macaanku. Waa kuw...
Somali - Online Resource
Waxaa buugyarahan loo qoray si lagaaga caawiyo in aad wax dheeraad ah ka fahanto finanka. Waxuu kuu sheegayaa waxa ay yihiin, waxa keena, waxa laga qaban karo iyo halka aad ka heli karto war dheeraad ah oo ku saabsan.
Somali - Booklet / Leaflet
CAMBAARTA HIDDE AH Atopic Eczema
Waxaa buugyarahan loo qoray si lagaaga caawiyo in aad wax dheeraad ah ka fahanto cambaarta hidde ah. Waxaa laguugu sheegayaa waxa ay tahay, waxa keena, sida loo daawayn karo, iyo halka aad ka heli karto war dheeraad ah oo ku saabsan.
Bilaw ahaan - Sida ay iska daweyntu u shaqeyso Basics - How treatment works
Daawada HIVgu waxay kaa caawinaysaa in uu yaraado xada cudurka ah ee jidhkaaga ku jira. Dhamaan maandooriyayaasha ka hortaga HIVga waxay isku dayaan inay ka hortagaan ugudbida uu HIVgu u gudbiyo unugyo cusub, laakiin qaybo kala duwan oo maandooriyyaa...
Bilaw ahaan - Dhinaca saameynta Basics - side effects
Sidoo kale in la kaantaroolo ama halkiisa lagu hayo cudur dhaliyaha sameeya jidhka qofka bini, aadamka ah waxay sababtaa in maandooriyayaasha in ay saameyn ku yeeshaan jidhkaaga siyaabo kala duwan. Wax kastoo saayida ama saameyn aan la rabin ayaa loo...
ifilo tallaalka: Yaa la rabaa inuu qaato iyo sababta Flu vaccination: who should have it this winter and why, 2019 to 2020
Buug-yarahaan wuxuu sharraxayaa sida aad gacan uga geysan karto badbaadinta naftaada iyo carruurtaada ee ifilada xilliga qaboobaha ee soo socda, iyo sababta ay aad muhiim ugu tahay in dadka halista ugu jira ifilada ay u helaan tallaalkooda bilaashka ...
Help with health costs - information in other languages
Haddii Ingiriisigu uusan ahayn luqaddaada hooyo oo aad u baahan tahay in aad hesho talobixin ku saabsan sida gargaar looga helo kharashka:...
Somali - Video
Waxaa buugyarahan loo qoray si lagaaga caawiyo in aad wax dheeraad ah ka fahanto daawada methotrexate. Waxaa laguugu sheegaya waxa ay tahay, sida ay wax u tarto, sida loogu daaweeyo xaaladaha cudur ee haragga, iyo halka aad ka heli karto warbixin dhe...
PSORIASIS – GUUDMAR Psoriasis - An Overview
Ururka Xirfadleyaasha haragga ee Ingiriiska ayaa ku deeqaya saddex buugyare oo warbixin u ah bukaanleyda oo ku saabsan cudurka haragga ee meelo jirka ka mid ah oo qolof yeesha ee la yiraahdo psoriasis. Buugyarahani waxaa loo qoray si uu kuugu guudmar...
Buugyarahan waxaa loo qoray si uu kaaga caawiyo in aad wax dheeraad ah ka fahanto cudurka isnadaamiska (scabies). Waxaa laguugu sheegi doonaa waxa uu yahay, waxa keena, waxa laga qaban karo, iyo halka aad ka heli karto war dheeraad ah oo ku saabsan.
Caafimaadka maskaxda: miyaa ay ku saameysay dhaqaale xumadu? Waanu soo dhaweynaynaa aragtidaada
Baaritaano loogu talagalay adiga iyo cunuggaaga Screening tests for you and your baby: description in brief
Buuga Badbaadayaasha The Survivor’s Handbook
Haddii aad tahay qof dumar ah oo ku nool UK oo dhibaatooyin qoysk la kulmeen, waxaa ku caawinkara buuga dadka ka soo badbaaday dhibaatooyinka qoyska oo la yidhaahdo !Buuga Badbaadayaasha’ (Survivor’s Handbook).
URTIKARIA IYO ANJIOEDEMA Urticaria and Angioedema
Waxaa buugyarahan loo qoray si lagaaga caawiyo in aad wax dheeraad ah ka fahanto cudurka urtikaria ee firiirica cuncunka leh iyo cudurka anjioedema ee firiirica cuncun dheeraad ah leh. Waxaa laguugu sheegayaa waxa ay yihiin, waxa keena, waxa aad ka q...